ဘရိုင်ယန် Nichols - အတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံး Killer
ဘရိုင်ယန် Nichols: အတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံး Killer
မတ်လ 11, 2005 တွင်သူအမျိုးသမီးလက်ထောက်နိုင်သည့်အခါ Nichols အတ္တလန်တာအတွက် Fulton ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာအဓမ္မပြုကျင့်မှုအဘို့စမ်းသပ်ခဲ့, သူမ၏သေနတ် ယူ. , သူရုံးတင်စစ်ဆေးကျင်းပနှင့်တရားသူကြီးများနှင့်တရားရုံးသတင်းထောက်ပစ်ခတ်ခံရရှိရာတရားခွင်၌သို့သွားလေ၏။ Nichols ကိုလည်းရုံးကနေသူ့ထွက်ပေါက်ကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူတစ်ဦးရဲအရာရှိ၏လက်ထောက်ဦးသေဆုံးကာတစ်ဦးအနည်းငယ်မိုင်ရုံးကနေသူ့အိမ်မှာဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်ပစ်ခတ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။
Nichols '' ထွက်ပေါက်သူသူမ၏တိုက်ခန်းတွင်အက်ရှလေစမစ်ဓားစာခံ ယူ. သူမ၏ 9-1-1 ကိုခေါ်ပြီးတော့စွန့်ခွာခြင်းနှင့်ကြကုန်အံ့သူ့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီးနောက်အဆုံးသတ်ထားတဲ့ဂျော်ဂျီယာသမိုင်းတွင်အကြီးဆုံးလူဖမ်းပွဲကြီးပြုလုပ်နေ၏တဦးတည်းကိုချွတ်ထားကြ၏။
ဘရိုင်ယန် Nichols ကိုရှောင်ကြဉ်မရဏပြစ်ဒဏ်
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2008
တစ်ဂျူရီစဉ်းစား၏လေးရက်အကြာမှာ deadlocked သည်သူ၏ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါဘရိုင်ယန် Nichols သည်ပြစ်မှုထင်ရှားအတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးလူသတ်သမား, သေဒဏ်ရှောင်ရှား။ အဆိုပါဂျူရီ Nichols သေဒဏ်ထက်ထောင်ထဲမှာဘဝပေးခြင်း၏မျက်နှာသာအတွက် 9-3 ခွဲထွက်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ 7, 2008
12 နာရီကြာဆွေးနွေးပြီးနောက်တစ်ဂျူရီမတ်လ 11 ရက်တွင် Fulton ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေသူ့သေစေနိုင်သောထွက်ပေါက်နှင့် ဆက်စပ်. လူသတ်မှုနှင့်အခြားစွဲချက်များစွာ၏အတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးလူသတ်သမားအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့, 2005 ဘရိုင်ယန် Nichols မဟုတ်တောင်းပန်ပြီးနောက်အားလုံး 54 စွဲချက်၏အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည် ရူးသွပ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းအားဖြင့်အပြစ်ရှိကြောင်း။
အက်ရှလေစမစ်ဘရိုင်ယန် Nichols ဆန့်ကျင်သက်သေခံ
ရဲလက်နက်မချသို့စွပ်စွဲအတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးလူသတ်သမားဘရိုင်ယန် Nichols ပြောဆိုသောသူမိန်းမသည်မိမိတိုက်ခန်း၌ချုပ်ထားလျက်ရှိသောကျင်းပနေစဉ်သူမသည်သူ၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်မှမေတ္တာရပ်ခံကြောင်း, မိမိစမ်းသပ်မှာသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ 22, 2008
ရှစ်အမျိုးသမီးများနှင့်လူလေးယောက်တစ်ဂျူရီကိုရွေးဖို့နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကိုးရက်သတ္တပတ်၏အနှစ်ပြီးနောက်စွပ်စွဲအတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးသေနတ်သမားဘရိုင်ယန် Nichols ရဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးတနင်္လာနေ့မြင့်မားတဲ့လုံခြုံရေးအောက်မှာဆဲတယ်။
Nichols ထိုနေ့၌ Fulton ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာတရားသူကြီးတရားရုံးသတင်းထောက်များနှင့်ရဲအရာရှိ၏လက်ထောက်ဦးသေဆုံးကာတစ်ဦးဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်အကြာတွင်အဘို့အရူးသွပ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းအားဖြင့်သော်လည်းမလွန်ကျူးတောင်းပန်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 10, 2008
ဂျူရီရွေးချယ်ရေးနောက်ဆုံးတော့ဘရိုင်ယန် Nichols လေးလူမျိုး၏လူသတ်မှုအပါအဝင် 54 ရေတွက်ဖို့ရူးသွပ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းအားဖြင့်သော်လည်းမလွန်ကျူးတောင်းပန်ပြီးနောက်တစ်ရက်သေနတ်ပစ်သည့်အတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးထဲမှာစတင်လိုက်ပါပြီ။ 600 ကျော်မျက်မြင်သက်သေများလကြာကြာရှည်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်သက်သေခံရန်စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲဘရိုင်ယန် Nichols အဘို့အမိန့်ထုတ်
ဇွန်လ 12, 2008
တစ်ဦးကတရားသူကြီးကိုအစိုးရရှေ့နေတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူသူ 2005 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအတ္တလန်တာရုံးထဲကမိမိသွားသောလမ်းကိုပစ်သတ်သည့်အခါသူကရူးသွပ်ခဲ့တောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သူဘရိုင်ယန် Nichols, ဆနျးစစျရှိနိုင်ပါသည်ကြောင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဧပြီလ 23, 2008
ဘရိုင်ယန် Nichols '' ကာကွယ်ရေးအသင်းသူသားကောင်များတဦး၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်တရားသူကြီးကိုယ်တော်တိုင် recuse သင့်တယ်ဆိုပါတယ်။
တရားသူကြီးဘရိုင်ယန် Nichols ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက်ဂျူရီရေကူးကန်သိမ်းထားပြီး
ဧပြီလ 11, 2008
အဆိုပါအတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးသေနတ်ပစ်မှု၌အသစ်တရားသူကြီးကဂျူရီရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကကာကွယ်ရေးများအတွက်ရန်ပုံငွေကျော်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကကြားဖြတ်ခံရမီချွတ် left ရှိရာဇူလိုင်လမှာထပ်ကိုစတင်လိမ့်မည်ဟုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သာလွန်တရားရုံးတရားသူကြီးဂျင်မ် Bodiford ဂျူရီရွေးချယ်ရေး 3500 ၏မူလဂျူရီရေကူးကန်ကနေဇူလိုင်လ 10 ကိုဆက်လက်မယ်လို့တစ်အာဏာရထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တရားသူကြီးခြေလှမ်းများ Down သေနတ်ပစ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး
ဇန်နဝါရီလ 30, 2008
မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးတော်မူသည်ကားသူ့ကိုကိုးကားပြီးနောက်ဘရိုင်ယန် Nichols ရဲ့အတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးပစ်ခတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတရားသူကြီးကိုဆင်းအရှိန်မြှထားပါတယ် "ကမ္ဘာပေါ်မှာလူတိုင်းကိုသူကပြု၏သိတယ်။ "
ကောင်တီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဘရိုင်ယန် Nichols '' ကာကွယ်ရေးကူညီပါရန်
ဇန်နဝါရီလ 15, 2008
အဆိုပါ Fulton ကောင်တီကော်မရှင်တစ်ဦးစိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်များအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်မိမိအကာကွယ်ရေးအတွက်ကူညီပေးဖို့ $ 125000 ဖြုန်းဖို့မဲပေးအပြီးစွပ်စွဲအတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးလူသတ်သမားဘရိုင်ယန် Nichols ၏သေဒဏ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအဖြစ်အစောပိုင်းနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မတ်လအဖြစ်ကိုတဖန်စတင်နိုင်ပါတယ်။
တဖန်နှောင့်နှေးဘရိုင်ယန် Nichols လူသတ်မှုစမ်းသပ်
နိုဝင်ဘာ 16, 2007
ပဉ္စမအကြိမ်, စွပ်စွဲအတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံး Killer ဘရိုင်ယန် Nichols ရဲ့လူသတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးကြောင့်မိမိအကာကွယ်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်းနှောင့်နှေးခဲ့သညျ။ ဝေဖန်မှုကြီးထွားလာနေသော်လည်းမိမိအသေနတ်များမှကပ်, တရားသူကြီးဟီလ်တန် Fuller Nichols '' ကာကွယ်ရေးအသင်းမှထောက်ပံ့ပေးပိုပြီးပိုက်ဆံလည်းမရှိသည်အထိသူရုံးတင်စစ်ဆေးမစတင်လိမ့်မည်ဟုစိုးစံလေ၏။
DA Nichols စမ်းသပ်၏တပ်ဖွဲ့ Start ကိုနိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး
နိုဝင်ဘာ 2, 2007
အဆိုပါ Fulton ကောင်တီခရိုင်ရှေ့နေဂျူရီရွေးချယ်ရေးပြန်လည်စတင်ဖို့အတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအညွန့်အမှု၌တရားသူကြီးကိုဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ဂျော်ဂျီယာတရားရုံးချုပ်နဲ့တိုင်ကြားချက်တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ 15, 2007
ဘရိုင်ယန် Nichols ရဲ့တရားခွင်ကိုသူလုနီးပါးလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကမှထွက်သည်မိမိသွားရာလမ်းကိုရိုက်ကူးစွပ်စွဲသည်အတူတူပင်အဆောက်အဦများတွင်စတင်အဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီဒီအပတ်က Fulton ကောင်တီရုံးမှာတင်းကျပ်စွာဖြစ်လိမ့်မည်။
ငွေမေလတွင်နှောင့်နှေးဘရိုင်ယန် Nichols '' စမ်းသပ်မရှိခြင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2007
မိမိအတရားရုံးခန့်အပ်ရှေ့နေများပေးဆောင်တာဝန်ခံအေဂျင်စီပိုက်ဆံထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်အတ္တလန်တာရုံးပစ်ခတ်မှုအမှု၌ဘရိုင်ယန် Nichols ၏တရားခွင်နှောင့်နှေးစေခြင်းငှါ။
ဇန်နဝါရီလ 11, 2007
ဘရိုင်ယန် Nichols စမ်းသပ်နှောင့်နှေးငြင်းပယ်
ဒီဇင်ဘာလ 22, 2006
သာလွန်တရားရုံးတရားသူကြီးဟီလ်တန် Fuller ဘရိုင်ယန် Nichols ရဲ့တရားခွင်ရဲ့ start နှောင့်နှေးကြလိမ့်မယ်လို့အခြားကာကွယ်ရေးရွေ့လျားမှုပယ်ချထားသည်။
ဇန်နဝါရီလ 30, 2006
ဘရိုင်ယန် Nichols များအတွက်ရှေ့နေများလက်ရှိတရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအစမ်းသုံး, အခြားရုံးသို့ပြောင်းရွှေ့စေခြင်းဟုမေးကြသည်။
ဓားစာခံအက်ရှလေစမစ် Nichols meth စာပေးစာ
စက်တင်ဘာ 28, 2005
အက်ရှလေ Smith ကအာဏာပိုင်များအတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးလူသတ်သမားဘရိုင်ယန် Nichols ဖမ်းယူဝိုင်းသောမိန်းမသည်သူမ၏ယုံကွညျခွငျးအကွောငျးသူ့ကိုနှင့်ပြောဆိုသောနှင့်သူမ၏ခုနစ်နာရီဓားစာခံပေးနေတာစဉ်အတွင်းသူ့ကိုစိတ်ကြွဆေးပေးသောသူမ၏သစ်ကိုစာအုပ် "မဖြစ်နိုင်ပုံပေါက်အိန်ဂျယ်" တွင်ကပြောပါတယ်။
နှစ်ဦးကအက်ရှလေ Smith ရဲ့ခင်ပွန်း၏လူသတ်မှုအဖမ်းခံရ
ဇွန်လ 23, 2005
ဒံယလေသ (Mack) စမစ်တစ်ခုသြဂုတ်လ, ဂျော်ဂျီယာတိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးမှာအသေသတ်ခြင်းကိုဓားဖြင့်ထိုးခံခဲ့ရသည်လေးနှစ်ပြီးနောက်, လူနှစ်ယောက်အက်ရှလေစမစ်, သို့ကိုယ်တော်တိုင်ဖွင့်ဖို့အတ္တလန်တာရုံးလူသတ်သမားယုံကြည်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ခင်ပွန်း၏တွင်းမှသေခြင်းတရားများအတွက်စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်အဖမ်းခံရပြီ ရဲတပ်ဖွဲ့က။
မေလ 5, 2005
အဆိုပါ Fulton ကောင်တီခရိုင်ရှေ့နေတစ်ဦးအတ္တလန်တာရုံးထဲကမိမိသွားသောလမ်းကိုရိုက်ကူးသေလွန်သောသူတို့သည်လူလေးယောက်ထွက်ခွာနှင့်ဂျော်ဂျီယာသမိုင်းတွင်အကြီးဆုံးလူဖမ်းပွဲကြီးပြုလုပ်နေချွတ် setting စွပ်စွဲထိုလူများအတွက်သေဒဏ်ရှာကြလိမ့်မည်။
အက်ရှလေစမစ် $ 70,000 ဆုကြေးစုဆောင်းရရှိ
မတ်လ 24, 2005
အက်ရှလေစမစ်အာဏာပိုင်များရုံးသေနတ်သမားဘရိုင်ယန် Nichols ဖမ်းယူကူညီမှုအတွက်ဆုလာဘ်ပိုက်ဆံအတွက် $ 70,000 ပေးထားခဲ့သည်။
ဓားစာခံ: 'ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏တံခါးထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏' '
မတ်လ 14, 2005
အက်ရှလေစမစ်သည်အတ္တလန်တာအုပ်ချုပ်ရေးရုံး Killer မိမိအထဲ၌လှည့်စေချင်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့သူ 26 နှစ်အရွယ်ဓားစာခံမှဘရိုင်ယန် Nichols မှဖတ်ပါ "ဘဝ Driven အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်," သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် shared နှင့်ထို့ထက် ပို. ထက်ခုနစ်ခုနာရီသူ့ကိုနှင့်တကွဆုတောင်းလေ၏ သူမ၏ Duluth, ဂျော်ဂျီယာတိုက်ခန်း၌တည်၏။
အုပ်ချုပ်ရေးရုံး Killer လှိုင်းတံပိုးတို့သည် '' အဖြူရောင်အလံ '' လက်နက်ချဖို့
မတ်လ 12, 2005
သူတို့ 911 ကိုခေါ်ဖို့စီမံတဲ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးပိုင်တစ်ဦးက Metro အတ္တလန်တာဧရိယာတိုက်ခန်းဝိုင်းရံပြီးနောက်ဘရိုင်ယန် Nichols, သောကြာနေ့တစ် Fulton ကောင်တီတရားခွင်၌အတွက်လူသုံးယောက်သတ်သောယောက်ျားသည်အာဏာပိုင်များထံလက်နက်ချဖို့အဖြူရောင်အလံချီလွှဲ။
အုပ်ချုပ်ရေးရုံး Killer ရဲများကအဆိုပါစလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံကိုပေးသနား
မတ်လ 11, 2005
အဆိုပါတရားခံယာဉ်မောင်းခံရဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ယာဉ်ကပါမယ်ခဲ့သည့်အနေဖြင့်အတူတူပင်ကားပါကင်တစ်ခုအနိမ့်ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် 14 နာရီအကြာတွေ့ရှိခဲ့အခါသောကြာနေ့နံနက် Fulton ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာလူသုံးယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးသူအတ္တလန်တာသည်လူအဘို့လူဖမ်းပွဲကြီးပြုလုပ်နေအများကြီးပိုရှုပ်ထွေးဖြစ်လာခဲ့သည် အခိုးခံရ။
Killer Share Miller ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှပြစ်မှုထင်ရှား
လူဆိုးချားလ်စ် "Lucky" Luciano ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
တရုတ်သု - စိုင်းမောက်ခမ်း Weng ကသူ့မြင်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့
ADX Supermax ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်မှာနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားအကျဉ်းသား
ဓာတုဗေဒအတွက် RT ကိုအဓိပ္ပာယ်
Non-စံပြဓါတ်ငွေ့ဥပမာပြဿနာ vs စံပြဂတ်စ်
ဒံယလေသ Libeskind, Ground Zero မာစတာအစီအစဉျ
Brownian Motion တစ်ခုနိဒါန်း
10 causa က de cancelaciónဏrevocación de la ဗီဇာက de turista
Short-ဂိမ်းအလေ့အကျင့်: 11-Ball ကိုလေ့ကျင့်ခန်း
အဘယ်ကြောင့် Lewis ကနှင့် Clark ကတောင်တက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မြောက်အမေရိကခဲ့သလား
ဦးခေါင်း-to-ဌာနမှူးနှိုင်းယှဉ်: 2008 Ford ကား Mustang GT ကို vs. 2008 Dodge Challenger SRT8
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: သင်္ဘော USS အနောက်ဗာဂျီးနီးယား (BB-48)
5 forma မသန်စွမ်း adquirir ciudadaníaက de Estados UNIDO y က su pasaporte
Secret Service ဟာသ
Mesoamerica Timeline ကို
အားလုံးအချိန် 10 အကြီးမြတ်ဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, Movies